Home TRF na Press 2019
Ndi oru nta akuko achọpụtala Thegwọ Ọrụ Foundationgwọ ma na-agbasa okwu banyere ọrụ anyị gụnyere: nkuzi anyị banyere ihe ize ndụ sitere na binging ogologo oge na porn; oku maka inweta mmuta, ụbụrụ gbadoro ụkwụ na ụlọ akwụkwọ niile; mkpa maka ọzụzụ nke ndị nlekọta ahụike NHS na-akpali agụụ mmekọahụ na onyinye anyị research na mmekorita nwoke na nwanyi na ndi mmadu na-enwe mmekorita nke nwoke na nwanyi. Peeji a na-edepụta ọdịdị anyị na akwụkwọ akụkọ na ịntanetị. Anyị nwere olile anya izipu ọtụtụ akụkọ dịka 2019 na-aga n’ihu.
Njirimara Ndụ na Omenala, ederede Roisin Agnew. E bipụtara ya na ntanetị 9 Disemba 2019
Ọdịda dị ize ndụ nke 'ike ike mmekọahụ' yana ihe ọ pụtara nye ụmụ nwanyị
Grace Millane, India Chipchase, Natalie Connolly: a na-eji akụkọ nzuzo nke nwanyị eme ihe megide ha, ọbụlagodi n’ọnwụ
Mkpesa mmekọahụ na ụmụ nwanyị na-abawanye na UK na ụzọ dị egwu na obere nghọta. Ọ na - esite na ojiji nke akụkọ gbasara onwe nwoke nke ụmụ nwanyị n'oge ọnwụ igbu onwe ha site na mgbasa na ojiji nke omume BDSM, na - ekwukarị na oke arụmọrụ porn. Ihe na-edochaghị anya bụ ihe na-akpata ọgba aghara ndị a na-akpata, na otú ụmụ nwanyị na-enwe nkwekọrịta na itinye onwe ha na ụdị mmekọahụ siri ike na-agwa nsogbu dị ukwuu n'etiti mmekọahụ taa.
The ogbugbu nke akpa azụ Britain dị afọ 21 bụ Grace Millane na nnwale dị elu na-esote ya kpatara nchegbu miri emi, na-akọwapụta ụzọ a ga-esi jiri akụkọ nzuzo nke nwanyị mee ihe megide ha dị ka akụkụ nke 'ihe ike mmekọahụ' siri ike.
N'uhuruchi nke ụbọchị ọmụmụ 22 ya, Millane - onye na-akwado azu na New Zealand - soro otu nwoke ọ hụrụ na Tinder soro ụbọchị. Ka ha gachara ụlọ nke abalị, ha lọtara n'ụlọ ebe ọ gara kpagbuo nwunye ya mgbe ha na-enwe mmekọahụ. Agbanyeghị na ndị juri kwupụtara amamikpe ahụ n'ọnwa gara aga, ikpe ahụ n'onwe ya kpasuru iwe n'ụzọ e si gosipụta ndụ mmekọahụ nke Grace dịka ihe akaebe megide ya. Ejiribu òkè ya na BDSM na ojiji nke ngwa ọdịnala dị ka Whiplr dị ka ihe akaebe na ọ nwere ụdị omume ụfọdụ, na-egosi na nke a bụ 'egwuregwu egwuregwu na-adịghị mma'. Akpọrọ otu n'ime ndị enyi ya ochie akpọrọ ka ndị nnọchite anya na-agbachitere iji gosi na Grace na-agbachitere agụụ mmekọahụ.
Gburugburu UK na afọ iri gara aga, e meela a Pasent 90 na-abawanye na 'ike ike mmekọahụ', na n’ime afọ ise gara aga ọ na-aga nke ọma n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara ikpe. N'ụwa a, ụjọ jidere Fiona McKenzie Anyị enweghị ike ikwenye nke a, otu ndi na - aru ​​oru na - aru ​​oru nwere 'nwoke ojoo'Ojiji 50'- Achụpụ n'ụlọ nga Britain. Tinyere Labour MP Harriet Harman, ndị otu ahụ na-anwa ịtinye nkebi ahịrịokwu na Usegwọ Iji Ezinaụlọ Ahụ nke ahụ ga - eme ka ọ bụrụ ihe iwu na - ezighi ezi maka nwoke gburu nwanyị ikwu na ọ kwadoro ihe ike nke wetara ọnwụ ya. Ndị ahụ na-ebuputa ihe nkiri ahụ na-arụ ụka na ikwekọrịta ụfọdụ egwuregwu mmekọahụ adịghị ka ekwenye na-egbu egbu, dị ka ikpe Millane gosipụtara. Agbachitere 'nwoke na nwoke nzuzu' na - akpokwu ndi obi ojoo site na mmekorita nwoke na nwanyi ka ha bia n’ihu, n’egwu na ndu nmekorita ha ga - eji mee ha ihe ihere ma obu taa ha uta - ihe juputara n’ulo ikpe
“Ọtụtụ mgbe, ị gaghị ahụta ihe ọ bụla gbasara onye nwụrụ anwụ karịa aha ha yana ebubo ụgha ndị a” - Fiona McKenzie, Anyị enweghị Ike Ikwenye Mgbasa Ozi a
McKenzie kwuru, "Nke a yiri ihe a na-emeso ụmụ nwanyị iyi egwu na omenala yiri ka ọ dabara adaba na ime ihe ike megide ụmụ nwanyị." "Mana n'ihi ihe ụfọdụ na usoro ikpe mpụ, yana ruo n'ókè ụfọdụ na mgbasa ozi mgbasa ozi yana mgbe a na-akọ akụkọ, ekwenyere na ụmụ nwanyị ahụ kwuru 'ee, Achọrọ m ka m merụọ ahụ ahụ nke ukwuu. Achọrọ m ka ndụ m nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ n'ụlọ ọgwụ. '”
“Ọtụtụ mgbe, ị gaghị ahụta ihe ọ bụla gbasara onye nwụrụ n’aha ha na ebubo ọjọọ ndị o kwere ka ndị mmadụ nwee mmekọahụ tupu ya anwụọ,” McKenzie gara n'ihu. "Ọ bụrụ na anyị ga-alaghachi azụ dị ka afọ 90s na 2000, aha ụmụ nwanyị dị iche iche gbasaa n'akwụkwọ akụkọ n'okpuru isi okwu 'kinky sex mum', BDSM student student."
Nagide ajụjụ gbara gburugburu mgbagwoju anya nke mmekọahụ na ime ihe ike abụrụla ihe dị mkpa, ọ bụghị naanị n'ihi na ihe akaebe na-egosi na ọ na-egbu ụmụ nwanyị na-arịwanye elu, mana n'ihi na ọ bụ ngosipụta nke ọgba aghara zuru oke banyere etu ndị nọ n'okpuru 40 na-enwe mmekọahụ.
Mmekọ nwoke na nwoke ahụ siri ike aghọọla ihe na-ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya na-abịa dị ka akụkọ dịịrị onye ọ bụla, ma amabeghị ụdị ndọrọ ndọrọ ọchịchị gbasara mmekọahụ na-akpata ya n'etiti ndị ntorobịa. Ọmụmụ ihe emere Savanta ComRes maka RadioNNXX Radio Radio Izu gara aga kpughere na pasent 38 nke ụmụ nwanyị nọ n'okpuru afọ iri anọ na-enwe ịma aka, ị na-egbu ma ọ bụ na-akwa iko n'oge mmekọahụ. Pasent 40 nke ụmụ nwanyị a kwuru na ọ dị ha "nrụgide ma ọ bụ manye" ya. Ọ na-abụkarị ndị nwoke na ụmụ nwoke na-eme ihe nwoke na nwaanyị na-eme ihe ike. Ma, dị ka Mary Sharpe nke Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ - onye ọrụ ebere nke na-ahụ maka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na agụmakwụkwọ mmekọahụ - porn na-edozi ụmụ nwanyị n'otu aka ahụ ka ha chọọ “ihe ọjọọ ahụ iji nwee mmetụta ọ bụla”.
Sharpe gwara Dazed na mgbe ọ dị afọ iri abụọ na ise, i nwere ike ịbụ na ị na-elele porn iri afọ iri. O kwenyere na oge ọdịnala dị ugbu a na-agba ụmụ nwanyị ume ka ha dozie nnwere onwe mmekọahụ na oke nke mmekọahụ - nke mere ka ọ ka njọ mgbe ụmụ nwoke '' gbara akwụkwọ na ụmụ nwanyị chọrọ ka ha bụrụ ndị eti. ' Isi ihe dị mgbagwoju anya ebe a bụ na ụmụ nwanyị abụghị nanị ọdịnala, kama na ọ nwere ike ịkpụzi ọchịchọ ha, ma nye ha iwu ịchọ ụdị mmekọahụ nke na-abụkarị iweghachị echiche efu na-abụghị nke ha ma tinye ha. n'ihe egwu.
Arụmụka mmekọ nwoke na nwoke siri ike na-emekwa ndị BDSM na omume ya. Ndi mmadu ewerewo ihe omuma ya na echiche nduhie ya n’enweghi iwu na ntuziaka banyere nkwenye na nchekwa nke obodo n’achi. Broughtbụ wetara gị na ntanetị site na (ihe jọgburu onwe ya) Ojiji 50 Mmetụta a na - agba ume na ịgha ụgha na ịgha ụgha banyere ọdịbendị na obodo BDSM, nke na - agbaso iwu - nkwenye bụ ihe ndabere nke ọdịbendị kink, ma ọ bụrụ na ị na - eme ya ahụike na nchekwa, ị nwere ike ịbanye ma ọ bụ pụọ n'oge ọ bụla .
"Ọ ka siri ike ikwu ihe ebili mmiri a metụtara mmekọahụ megide ụmụ nwanyị na otu esi gbachitere ya na-ekwu maka anyị na oge ugbu a, mana ka anyị na-agụ ya, ọ dị mkpa na e debere nchedo n'ọkwa iwu na nke ọdịbendị"
Ihe ọzọ a tụlere bụ etu ime ihe ike agbụrụ si metụta 'nsogbu' na oke. Menmụ nwoke ga-erite ụdị ụzọ kachasị mkpa iji gosipụta ike na ike n'oge nsogbu nke mkpokọ ọnụ nwere ike ịbụ nkwubi okwu dị mfe nghọta, ma enweghị ezigbo akaebe ọ bụla (ma). Mana ọ bara uru ịtụle ma ụmụ nwoke 'na - akpọghachite azụ' na nzuzo nke ime ụlọ yana ebe dị anya n'anya ọha. A post-MeToo oge etinyewo mmekọahụ nwoke na nwanyị n'ọnọdụ ọgbụgba: ụfọdụ ụmụ nwoke na-achọpụta omume mmekọahụ ha mbụ ka aga-akọwa ugbu a dịka ihe anabataghị; ndị ọzọ na-enwe mmetụta iwe maka mgbanwe ndị were n’ihu ike na ọsọ gaa n’ihu n’ihu n’ihu ngagharị ahụ.
Conor Creighton, onye edemede na onye ndu ntụgharị uche nke tụgharịrị uche na ụlọ ọrụ na-agba ọsọ na ịcheta oke, kwenyere na enwere “oke ọgba aghara gbasara mmekọrịta” n'etiti ụmụ nwoke ugbu a, mana ọ bụchaghị iwe. Ọ na-ekwu, "Echeghị m na ụmụ nwoke na-ewe iwe, mana iwe bụ naanị mmetụta uche mmadụ na-agba ume ịkekọrịta." "Ya mere ọ bụrụ na nwoke nwere nkụda mmụọ, mwute, ma ọ bụ nwee mgbagwoju anya, ọ na-apụta dị ka iwe, n'ihi na ọ bụ otú ahụ ka anyị ga-esi na-akpa."
Ọ ka siri ike ikwu ihe ebili mmiri a na-eme ihe ike megide ụmụ nwanyị na otu esi echebe ya na-ekwu banyere anyị na oge dị ugbu a, mana ka anyị na-agụ ya, ọ dị mkpa na e debere nchebe na ọkwa iwu na nke ọdịnala. N'akụkụ iwu, nke a na-ekpuchi ihe ndị a na-enweghị ike ikwenye na mkpọsa a na ozi ha ka ha nwee mgbakwunye nke agbakwunyere Iwu mmebi iwu nke ụlọ nke ga - eme ka hụ na akụkọ gbasara nwanyị nwụrụ anwụ enweghị ike iji ya mee ihe. onye ebubo ogbu ya. Na ọkwa ọdịnala, ọ na-esiri ike ịma ebe ị ga-amalite. Nkwenye na ime ihe ike megide ụmụ nwanyị na-egosipụta onwe ya n'ụzọ aghụghọ na nke nzuzo - achọrọ ya ngwa ngwa - naanị ka anyị nwere ike ịnwale idozi nsogbu na-eto eto na mgbe ụfọdụ na-egbu egbu nke ụmụ nwanyị nwere mmasị na mmanye n'ike na ụdị mmekọahụ. ha nwere ihe ọghọm, ma hapụ omenaala anyị enweghị ike ịgụta ọnụ.
Edere ya na ntanetị na 6th Disemba 2019
Onye ọka ikpe Mary Sharpe na-ekwu banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na mmekpa ahụ na Nine
Advocate Mary Sharpe pụtara n'abalị ụnyaahụ na BBC ndị Nine iji kọwaa izi ihe ihe ike na-akpali agụụ mmekọahụ, nke ugbua pụta ìhè nkwenye nke nwoke maka igbu ọchụ Grace Millane November ikpeazụ.
Ms Millane - onye uwe ojii Britain nke 21 dị afọ - nwụrụ na New Zealand mgbe ya na nwoke ahụ nọ.
Ms Sharpe, onye enyemaka ya Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ mee ka ọha na eze nwee ike ịchọta nyocha a, na-ekwupụta ihe ọhụrụ na iwu nyocha afọ nke enyerela ikike ijide n'aka Ọchịchị UK.
Ekwentị porn na-eme ka ndị nọ n'afọ iri na ụma nweta ọgwụgwọ mmekọahụ
Nkeji edemede nke Mark Howarth na Andrew Gregory na Satọde 5 Ọkt Oktoba 2019
Ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eto eto na-achọ enyemaka amụbawo. Ndị ndụmọdụ na-ata ụta vidiyo nke 'mmekọahụ zuru oke' nke ụmụaka hụrụ ụmụaka gbara ka afọ asaa
Ọnụ ọgụgụ ndị ntorobịa na-achọ ọgwụgwọ mmekọahụ na NHS akarịala afọ abụọ, dị ka ọnụ ọgụgụ gọọmentị si kwuo.
Ndi okacha mara ngbali elu banyere onodu ojoo nke ihe nlere na igwe onyonyo ha na igwe mmadu na-atụ anya ka mmekọahụ “zuo okè oge niile”.
Na mkpokọta, ụmụaka 4,600 na ndị na-eto eto dị afọ iri na iteghete ma ọ bụ n’okpuru mkpa ọgwụgwọ psychosexual na 19-2017 na 18-2018. N’ime afọ abụọ gara aga, e nwere puku mmadụ narị anọ na narị anọ ha kwuru okwu ha.
N'ozuzu, ndị na-eto eto ruru 1 n'ime ndị ọrịa 10 na-anata ndụmọdụ gbasara mmekọahụ, ma e jiri ya tụnyere 1 n'ime afọ 30 afọ abụọ gara aga, NHS Digital kọrọ.
Muriel O'Driscoll, onye ndụmọdụ na onye na-ahụ maka mmekọrịta ụmụ nwanyị nwere mmeso nke na-emeso ndị nọ n'afọ iri na ụma, kwuru, sị: “Mgbe ụfọdụ, n'agbanyeghị nnweta mmụta nwoke na nwanyị nwere, ha anaghị eme ya Mara ihe ha na-eme ma ọ bụ tụọ anya ka mmekọahụ zuru oke oge ọ bụla.
Ha amaghi ihe ha na eme n'ihi na ha na-eme ka ha mata na ihe nkiri ndi mmadu n’ekwe ihe nzuzu ma obu vidiyo na Facebook na ndi ozo. Ọ bụghị ihe mere eme - eziokwu ezughi oke. Mgbe ụfọdụ mmekọahụ na-arụ ọrụ; mgbe ụfọdụ ọ naghị.
“Ha na-atụ anya na ndị mmadụ ga-enwe ike ibute ọrịa ntutu. N’ezie, ọ bụrụ na onye na - eto eto enweela ihe ọjọọ n’oge mmekọahụ ha, mgbe ahụ ọ na - eme ya n’obi. ”
O'Driscoll, onye rụburu ọrụ na NHS na Brook Advisory Centers ma na-eme ugbu a na Merseyside, kwukwara na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-eche mgbe ụfọdụ na akụkụ ahụ ha adịghị ka ọ bụ ka ọ dị n'ihe ndị ha hụrụ n'ịntanetị.
Mụaka na-asụ ngọngọ n'ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ntanetị site na mgbe ha dị afọ asaa, akụkọ a chọpụtara n'ọnwa gara aga. Nchoputa a, sitere na British Board of Film Classification, tụrụ aro na ndị nne na nna ụzọ n'ụzọ atọ chere na nwa ha agaghị ahụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ntanetị, mana ihe karịrị ọkara emeela nke ahụ. Ndị na-eto eto kọwara na obi adịghị ha mma n'ihe ha hụrụ.
Mary Sharpe, onye isi ndị na - ahụ maka mmekọrịta ọrụ ebere The Reward Foundation, kwuru, sị: “The overụbiga teknụzụ ókè na-eme ka ndị na-eto eto na-echegbu onwe ha, ndị dara mbà n'obi ma nwee nsogbu mmekọrịta nwoke na nwanyị. Kemgbe mmalite nke ịgbasa ozi ngwa ngwa dị elu na 2006, ọnụ ọgụgụ nsogbu ahụike ahụike arịala n'etiti ndị na-eto eto. A na-ejikọ ha?
"Internetntanetị na ụlọ ọrụ porn na-eme ihe kachasị njọ iji gọnarị ya, mana anyị chere na ejikọtara ha n'ihi na mgbaàmà na-apụtakarị ozugbo ndị mmadụ na-agafe detox dijitalụ nke na-eme ka ọgụgụ isi ha laghachi n'ihe ụtọ kwa ụbọchị."
N'ime afọ abụọ gara aga, ọnụọgụ ndị nọ n'afọ ndụ niile na-achọ enyemaka agbagoro ruo 47,300, nke 10% bụ ndị nọ n'afọ iri na ụma.
Claire Murdoch, onye isi ahụike ahụike na NHS England, kwuru, sị: “Ihe na-apụta ìhè nke ọma bụ mkpa ọ dị ka akụkụ ndị ọzọ nke ọha mmadụ malite ịmalite ọrụ maka omume ha, rụọ ọrụ kwesịrị ekwesị nke nlekọta ma kpochapụ omume ọjọọ na ntanetị - yabụ Ndị NHS ahapụghị iburu iberibe ha. ”
Edere Mary Sharpe n'isiokwu a siri ike banyere omume nke ụlọ ọrụ na-akpali agụụ mmekọahụ. NDỌ AKA NA NT:: ihe a nwere ihe ụfọdụ ndị na - agụ akwụkwọ nwere ike ịna-ewute. E Biputara 27 Septemba 2019.
Otu esi eme ka ndi ulo oru ihe ojoo juru
Ọtụtụ ndị kansụl emepụtala ntụzịaka nke mmekọrịta nwoke na nwanyị na mmekọrịta metụtara ụmụaka na ndị na-eto eto, nke na-anaghị adọta uche ya n'ihe ọjọọ nke foto ndị gba ọtọ. JO BARTOSCH na-akọ
JESICA REDDING nwụrụ n’izu gara aga; Los Angeles County Coroner gosipụtara na ọ dị afọ 40.
O mere ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'okpuru aha Jessica Jaymes. Ọnwụ ya dị elu abụghị ihe ọhụrụ nye ndị a na-akpọ 'ụlọ ọrụ ntụrụndụ okenye.'
Ihe nkiri mbụ nke ihe nkiri Raging rụrụ n'ime ya bụ Little Girl Lost, mgbe ọ dị naanị 16.
Taa, dị ka ahụ Jessica Redding dị na-eche ọnwụ mgbe ọ nwụrụ na Los Angeles, opekata mpe, otu mkpokọta kansụl ebe a na Britain na-agwa ụmụaka na-erughị Rakin bụ mgbe ọ mere ihe nkiri mbụ ya na ha kwesịrị ịhapụ ihe ha na-ekwu. ihe na-akpali agụụ mmekọahụ.
Warwickshire County Council's Ndụmọdụ “Na-asọpụrụ Onwe Gị”, nke a na-akwado Public Health Warwickshire, na-enyere aka iwepu ihe ọ kọwara dị ka akụkọ ifo banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ.
Warwickshire bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ndị kansụl emepụtara na-enwetara enyo enyo banyere mmekọrịta mmekọahụ na mmekọrịta mmekọrịta maka ụmụaka, ndị ntorobịa na ndị okenye.
Fọdụ ndị na-agụ akwụkwọ nwere ike iche na nsogbu ụmụaka na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ bụ na ọ na-emebi nghọta ha banyere mmekọahụ, na-eduga na ntiwapụ nke ụmụ nwoke na-agbagha ihe ha hụworo ma na-awakpo ụmụ agbọghọ n'ụlọ akwụkwọ (na-atọ ụtọ. Peme ihe banyere mmeko nwoke na nwanyị "n'ụlọ akwụkwọ ndị ọgbọ" mụbara site na 521 pasent na Warwickshire n'etiti 2013-16).
Ndị ọzọ nwere ike ịkọ akụkọ ebili na labiaplasties ma ọ bụ na 40 pasent nke ụmụ agbọghọ ndị na-akọ na enwere nrụgide ka ha nwee mmekọahụ, dị ka ihe na-egosi na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta ọha mmadụ.
Ha abụọ ga-abụ ihe na-ezighi ezi, dị ka ntụzi nkwanye ùgwù maka onwe gị si kwuo, nke ji obi ike kwuo otu "ihe kachasị mkpa maka ndị na-eto eto na-ele porn bụ na a na-ahụ ya ka ihe ha ekwesịghị 'ime.'
Na mpekere ha dị ka 'nwatakịrị dị ime ụmụaka,' ndị na-akwado ndụmọdụ dị otú ahụ na-arara onwe ha dị ka ndị na-amaghị nwoke, ndị na-eme omume rụrụ arụ na-akpali agụụ mmekọahụ.
Ndị nkatọ na-ekwu na ha na-elele "Lebian Anal Trainers 2," "Anal 3" ma ọ bụ '' Slave for a Night '' (utu aha kachasị mma nke aha ndị a kpọtụrụ aha n'oge gara aga Jessica Redding) enweghị ike ime ka nwatakịrị ghọta nke mmekọrịta mmekọrịta dị mma. dị ka, dị mmapụta nke pịrị amị na-adọrọ adọrọ ndị nwere ike ịchọrọ ịhụ ụzọ nke ọma.
N’ezie, ihe kpatara na otutu ndi nwanyi bu ihe obi riri nne banyere ihe nile bu ihe nlere bu ihe omuma n’ihi na o zuru omuma ndi iPhone ikike inwe nmeko ha n’ezi.
Onweghị ihe dị njọ na-emesighachi ndị ntorobịa na ịkpa oke agụụ anaghị eme ka ha kpuo ìsì, ma n'ezie ọ nwere ike inyere ha aka inwe ahụ iru ala.
Ma mgbe nwatakịrị nwanyị dị afọ 12 degaara pectkwanyere Onwe Gị ùgwù, nyere ya nsogbu na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ riri ya ahụ́ ma kpughee na ya na-ele ya ruo “ọkara nke abalị,” ihe a zara ya abụghị ịgwa ya na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ jọgburu onwe ya, ọ bụghịkwa iji mesie ya obi ike na mmekọahụ na mkparị ahụ gosipụtara abụghị ihe ọ hụrụ. nwere ike ịtụ anya dịka okenye.
N’ezie, kwanyere onwe gị ùgwù na-ekwu na ile ndị gba ọtọ na-eri ahụ ma ọ bụ na-emebi ụzọ ọ bụla.
Dabere na Mary Sharp nke wardlọ Ọrụ wardgwọ Ọrụ, onyinye ọrụ agụmakwụkwọ na-elekwasị anya n'ịhụnanya, mmekọahụ na ịntanetị, nke a abụghị eziokwu.
N'ajụjụ ọnụ ndị mbụ banyere onye nlekọta ahụ, ọ kọwara, sị: “ornornụbiga porn ókè na-agbanwe ka ụmụaka si enweta agụụ mmekọahụ… na afọ mgbe ha kachasị nwee nsogbu ahụike na ihe iri ahụ. Ọtụtụ ihe riri ahụ na nsogbu ahụike uche na-amalite n'oge uto. ”
Enwere ike ịhụ nsonaazụ nke ihe a na ọnụego nke adịghịzi emebi emebi, nke abawanyele site na atụmatụ 2-3 pasent nke ụmụ nwoke nọ n'okpuru 35 na 2002 ruo ihe dị ka 30 pasent kemgbe mmalite nke ntanetị nke na-akwụghị ụgwọ, porn elu-definition.
N'ebe ozo saịtị a "ajụjụ gbasara mmekọrịta" na-agwa ndị ọrụ ka ha họrọ aha azịza ha nwere ike ime ma ọ bụrụ na ha jide onye ha na ha na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ.
N’ezie, anyị maara na “onye otu” na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike bụrụ nwoke, ọ bụ ezie na Nkwanye Youkwanyere Onwe Gị ugwu na-echetara anyị “ma ụmụ nwoke ma ụmụ agbọghọ na-ele porn.”
Ma ị họrọ “ọ na-emebi emebi” ma ọ bụ “ọ na-ekpo ọkụ” nhọrọ, azịza ya bụ itinye nke ahụ erughị ala ọ bụla iche n'ihi na onye ọ bụla “nwere mmasị n'ihe.”
Iji mee ka o doo anya, inwe “ihe nzuzu” abụghị nsogbu ahụ, mmetụta dị njọ nke ihe onye na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji ya eme ihe banyere onwe ya.
Kama ime ka ndị mmadụ dịrị n’otu, iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ eme ihe bụ Isi ihe kpatara mmebi mmekọrịta.
Site na nleta na saịtị ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-adabara ndị nke Netflix, Amazon na Twitter jikọtara ọnụ, ụlọ ọrụ mmekọahụ ga-adị ndụ na-enweghị enyemaka mmekọrịta ọha na eze site na mkpọtụ nke Warwickshire.
Ka o sina dị, Ntuziaka Na-ahụ Maka doeskwanyere Onwe Gị ùgwù na-arụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze maka ụlọ ọrụ dị mma, na-akọwa, sị: “sexlọ ọrụ mmekọahụ bụ otu n'ime ole na ole ụmụ nwanyị na-eme karịa ego karịa ụmụ nwoke.”
Maka obere ndị pere mpe nke a bụ eziokwu. Were Sheena Shaw dịka ọmụmaatụ. O meworo onwe ya aha dika “eze nwanyị nke rosebudding. "
Rosebudding bụ okwu ejiri na ụlọ ọrụ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ maka nyocha prolapse, ebe a na-amanye ikensi ahụ site na nkwonkwo ụkwụ.
Nke a doro anya na ọ bụ sexy, dị ka Shaw si kwuo n'ụzọ sara mbara: "Omenala na-akụziri anyị ihe anyị ga-enwe mmasị na ihe na-agaghị amasị."
Womenmụ nwanyị ndị na-eme ihe a dị egwu na-egbu mgbu, nnukwu nsogbu afọ na ọpụpụ mmiri.
Mgbe magazin osote jụrụ Shaw ihe ọ nwere ike ịme ma ọ bụrụ na mmerụ ahụ, ọ zara, sị: “O nweghị onye na-ekwu okwu banyere nke ahụ. Ha na-eme gị ka ị bịanye aka na mgbawa tupu ime ihe nkiri ndị a. Absolutely na-agaghị enweta ndị ọrụ 'comp.
Ikekwe n'enyeghị ha ihe anụ ahụ nke ihe na-akpali agụụ mmekọahụ nke oge a, ndị na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ na-akọ na ọgwụ ọjọọ, mmegbu na mmanye nke nọ n’elu bụ nsogbu; ọtụtụ ụmụ nwanyị na - adịkarị n'etiti ọnwa atọ na 18 tupu ịpụ.
Ka anyi kwuo eziokwu, onweghi ikike inye gi ikike ime ka ogwe ukwu gi mechie onu gi mgbe a na - akpo gi “akwụna,” fesaa ya n’elu igwe onyonyo.
Agbanyeghị eziokwu ndị a jọgburu onwe ya na mkpokọta ikwanye ugwu onwe gị na-ekwu "ọmụmụ na-egosi na n'ezie ụmụ nwanyị porn kpakpando nwere ugwu onwe ha na afọ ojuju dị elu karịa ọnụọgụ ndị nkịtị."
Na ọha mmadụ porn, ekwesịrị ka anyị bụrụ ihe ga - eme ma kwadebe ụmụaka maka ihe ha ga - ahụ na ntanetị, na izizi, ụfọdụ ntụzi aka na akwanyere Onwe gị ọmịiko na echiche.
Ma mmecha nke ụlọ ọrụ na-ewute ewute na-ata ahụhụ nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwanyị enweghị mgbaghara.
N'ime ozi ya nke yiri ihe dabara adaba, nke ndị ntorobịa nwere ma bụrụkwa ihe ga-emetụta, Warwickshire County Council na-etinye ihe egwu n'ịgba ọgbọ iji chee na mmetọ a gosipụtara na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ abụghị naanị ihe nkịtị, kama ọ chọrọ.
Jo Bartosch bụ onye isi nke Pịa Gbanyụọ, mkpọchi iji kwụsị agụụ maka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Biko gaa na ebe nrụọrụ weebụ ya ma chee echiche inye onyinye www.clickoff.org.
Mary Diamond na-ekwu ọtụtụ ihe na mpempe akwụkwọ a, nke e bipụtara na 19 April 2019.
Ndị na-eme mkpọsa na-anabata ndị na-agba ọsọ na-abịanụ na UK, ma ụka na-ekwu okwu na-enweghị isi na Chọọchị.
Ndị Katọlik anabatawo ọgbọ na-abịanụ na-ese foto ndị gba ọtọ na UK, bụ nke a ga-etinye n'ọrụ na ọnwa ndị na-abịanụ, sị na Chọọchị nwere ike idu ndú na ịlụ ọgụ nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
A mara ọkwa na izu a na afọ-nkwenye maka saịtị porn ga-amalite na July 15.
Ozugbo e gosipụtara, ndị okenye ga-egosiputa na ha karịrị 18 site na ịdenye nkọwa ha ma ọ bụ ịzụta ego, iji nweta porn.
Ndị Katọlik bụ ndị na-akwado ọgụ riri ahụ na Chọọchị dị na Scotland anabatawo ọganihu ahụ, ọ bụ ezie na ha kpachara anya na a ghaghị chebe nnwere onwe ikwu okwu site na nchịkwa ọchịchị.
Matt Fradd bụ onye na-ede akwụkwọ Katọlik na onye na-ekwu okwu n'isiokwu banyere porn na US.
Ọ na-emepe usoro ihe omume 21 ọhụrụ n'oge na-adịbeghị anya Strive21 iji zọpụta ndị mmadụ site na nsogbu nke ịgba ahụ.
"Enwere m obi uto banyere ileba anya na UK", o kwuru. "Ọ gaghị egbochi ndị na-eto eto na-agbalị ịbanye porn mana ekele na anyị na-ahụ ugbu a ụdị igbochi ẹkenam.
"Chọọchị nwere ọrụ ọ ga-eji na-alụ ọgụ megide foto ndị gba ọtọ. Dika Katishik Katọlik si kwuo, 'ekere anyi n'onyinyo na oyiyi nke Chineke' ma n'ihi nke a, o gbanwere otu anyi si eche banyere ndi mmadu. Nkụzi nke ụka banyere isi okwu a bụ na porn na-agba anyị ụta-a na-akpọ anyị ịbụ onye isi nke ọchịchọ anyị. "
Mr Fradd gbakwunyere, sị: "Ejila oji mee ihe na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ụmụaka ndị nọ na 8-12 na-ele porn na ha bụ ezigbo pig pig pigs maka ihe anyị na-agaghị amatacha na ọ ga-emerụ ya ruo mgbe 50 dị afọ.
"Echere m na ọ bụ ihe na 50 afọ ndị mmadụ ga-ejide anyị na obi nkoropụ na-asị, 'Olee otu ị ga-esi mee nke a, olee otu ị ga-esi kwe ka anyị lelee ihe a.'
"Ọ bụ ọdachi na-echere ime ma ekele na ndị mmadụ na-amalite ige ntị ma na-eteta na nsogbu nke ụmụaka na-ekiri porn."
Mgbalị SpeedNNXX na US n'izu abụọ gara aga, ma tinyeworị ụmụ mmadụ 21 ka ha banye na usoro mmebi ahụ, na seminarị Katọlik gosipụtara mmasị na iji ngwá ọrụ ahụ.
Ihe ojoo ojoo
Onye ụkọchukwu Scottish na-arụ ọrụ nlekọta ahụike anabatawokwa mmachibido iwu ọ bụla nke ga - enyere aka ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
Canon William Fraser, onye ụkọchukwu nke ụka nke Ụlọ Nzukọ Ọhụụ nke dị na Tayiltilt, kwuru, sị: "N'ụzọ dị mwute, ahụrụla m nsogbu ahụ riri ahụ site n'ọrụ m na-agwọ ọrịa.
"Ịṅụ ọgwụ ọjọọ na-abụkarị àgwà maka mmadụ ọ bụghị nanị site na porn n'onwe ya kamakwa dị ka mmeghachi omume nke 'mmerụ.' Nke a dị ka ụdị ọgwụgwọ ọ bụla ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ na ọtụtụ mgbe ọ bụghị ma ọ bụrụ na 'emerụ' akụkụ ahụ gwọrọ mgbe ahụ ọ na-adị mfe iji 'àgwà' ahụ. "
Canon Fraser kwukwara na 'wepu' onye si na ọgwụ ọjọọ riri ahụ nwere ike ịme otu nnọkọ ma na 'ikpe ndị dị oke' nwere ike iwe ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọbụna afọ ị ga-ede.
"Anyị na-echetara anyị mgbe nile na ike nke dị n'ime anyị site na Jizọs Kraịst karịrị ike ọ bụla n'ụwa," ka Canon Fraser kwuru, na-agbakwụnye na 'Chineke ga - eme ka anyị nwere onwe anyị dịka Ọ meriri nmehie niile n'elu obe. '
Porn bụ £ 75 ijeri ụwa ọrụ. Ihe ọmụmụ 2016 nke e bipụtara na Eastern Economic Journal na-ekpughe ndị mmadụ na-ele egwu porn na-adịkarị ka ha ga-alụ karịa ndị na-adịghị.
Mary Sharpe bụ onyeisi ụlọ ọrụ na The Reward Foundation, ọrụ ebere mmụta na-adabere na Scotland nke na-ele ihe sayensị n'azụ mmekọahụ na ịhụnanya.
Mb Sharpe kwuru, sị: "Anyị na-akwado iwu na-abata. Ndị nne na nna na-echekarị na porn dị ka ọ bụ 20 afọ gara aga, ma ọ bụ ugbu a ka njọ. Ọ na-ebu ọtụtụ nsogbu mmekọahụ.
"Ọ na-enwe mmetụta dị ukwuu n'ahụ ụbụrụ ndị mmadụ, karịsịa ndị na-eto eto bụ ndị na-ebido ịghọ ndị a na-etinye na ihe."
Pope ahụ akwadola ọrụ ebere nke Sharpe, ọ na-arụ ọrụ na ụlọ akwụkwọ Katọlik ịzụlite ihe mmụta maka ndị nkụzi.
"Anyị chere iwu ọhụrụ ahụ dị oke egwu. Ọ gaghị agwọta nsogbu ahụ ma agụmakwụkwọ dị oké mkpa n'ụlọ akwụkwọ na n'ụlọ, "ka o kwuru.
"Anyị na-eke ma na-emepe atụmatụ ọmụmụ ihe maka ụlọ akwụkwọ gafere Scotland, gụnyere ndị Katọlik, ebe anyị ga-eme ka ha kwekọọ na nkuzi nke Church na atụmatụ atụmatụ ịhụnanya nke Chineke.
"Chọọchị na ndị nzuko omeiwu nwere ike ịrụ nnukwu ọrụ n'ịlụso esemokwu ahụ ọgụ. Ọ dị oke nkpa ịkụziri ndị Katọlik okwu a ma Chọọchị agaghị ekpe ekpere ụdị nsogbu a ga-apụ-ha ga-ege ntị ma jiri ezi okwukwe na-ege ntị ma ọ bụrụ na ha eme ya, ha nwere ike ịkpata esemokwu ahụ. "
Mary kwukwara na enwere ike 'ike' ndi nchu aja ka ha kwue okwu a ma obu nye ndi mmadu aro ebe ha ga aga maka enyemaka.
Nnwere onwe nke ndị na-eme mkpọsa na-ekwupụta okwu na-akpata nchegbu na iwu ọhụrụ ahụ ga-ahụ nkedo na ikwu okwu n'efu. Ntuchi iwu egwu a bụ akụkụ nke nnukwu mgbalị gọọmenti na-eme iji gbochie ihe ọ na-ewere dị ka okwu ịkpọasị na netwọk.
Otu ọnụ na-ekwuru maka Chọọchị Katọlik dị na Scotland kwuru, sị: "Ọ dị mkpa, na iwu ọhụụ ọ bụla nke na-ekwu na ọ ga - eme ka ọ bụrụ 'ịntanetị' na 'ihe ọjọọ' na - akwado nnwere onwe ikwu okwu, echiche, akọnuche na okpukpere chi nke na - nke echiche na arụmụka, na-enweghị egwu ma ọ bụ ihu ọma.
"Ịchebe nchekwa nke ụmụaka na nchekwa ndị dị na ya dị ezigbo mkpa. Na enweghi ihe ebumnuche na-egosi na 'nsogbu' ma o siri ike ịhụ otú a ga-esi mee nke a. "
"Ikwenye onye nduzi onwe ya iji kpebie ma ma ọ bụ ọdịnaya adịghị emerụ ahụ ma nwee ike igbochi ya, o nwere ike ịpụta na nkwupụta nke nkwenkwe okpukpe."
Onye Scotland nke nne na nna Katọlik anabatawo ihe ndị na-eme porn.
Jo Soares, onye isi oche ndị nne na nna na-ahụ maka ọmụmụ ihe gbasara ndị Katọlik, kwuru, sị: "Iwu ọhụrụ ahụ kwesịrị ime ka o siere ụmụaka ike ịnweta mmekọahụ na-ekwesịghị ekwesị na ntanetị ma ọ bụ na-emeghị ihe ọ bụla.
"Ọ dị mkpa na anyị ga-egbochi ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ ka ụmụ anyị ghara ịzụlite àgwà na-adịghị ize ndụ banyere omume mmekọahụ na nkwenye ma ọ bụ echiche na-ezighị ezi banyere mmekọrịta na ahụ mmadụ.
"Mgbochi nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ n'Intanet ga-eme ka ọ na-esiri anyị ike ịduzi ụmụ anyị n'ihe onwunwe nke na-akụzi dị ka nkwenkwe anyị si dị ùgwù nke mmadụ ọ bụla."
Viagra dị ka ọgwụ ụzọ ndụ hụrụ Mary Sharpe hotara na akụkọ ndụ Huffpost site na 3 Eprel 2019.
'Ha Na-ewere Ya Tupu Ha Agaa Otu Klọb': Ihe mere Viagra ji eji ọhụụ ọhụrụ
Ọ bụghị naanị ọgwụ maka ndị okenye, ụmụ nwoke ji Viagra eme ihe ntụrụndụ na praịm. Site na Sophie Gallagher
Ọ bụ nke ugboro atọ Alex * nwara itinye condom ahụ ma na-akụ afọ n'ala. N'agbanyeghị na a kpaliri ya ma mara na nke a bụ naanị ohere o nwere ịnwe nwanyị ọ ga-ezute na mgbede ụbọchị ahụ, ọ nweghị ike idowe. Agbanyeghị etu ụbụrụ ya chọrọ isi nwee mmekọahụ, ahụ ya anaghị eme ihe.
N’ikpeazụ ọ nakweere ọnọdụ ahụ, rịọ mgbaghara ụbọchị ya maka “ụjọ ịrụ ọrụ” - site na mmanya na mmanya na-egbu ka njọ - ma edụọ iyi na ọ gaghị ekwe ka nke ahụ mee ọzọ. N'echi ya, ọ gara na nke mmiri ọgwụ wee zụta otu ngwugwu nke mbadamba 8 sildenafil, nke a na-akpọkarị Viagra.
Alex, n'etiti afọ iri abụọ ya, adabaghị na stereotype nke onye ọrụ Viagra: ọha mmadụ ka na-ahụ ọgwụ pulu na-acha anụnụ anụnụ dịka nke ndị okenye lụrụ, ikekwe na ahụ ike na nhụjuanya na afọ ma ọ bụ ọrịa metụtara ọrịa. Mana ikpe Alex, na mkpebi ya iji viagra mee ihe iji dozie nsogbu ahụ, adịghị iche.
Ọ bụ ọnwa 12 kemgbe Viagra bịara dị na UK na-enweghị ndenye ọgwụ. Ndị na-ere ọgwụ na-ekpebi ma ọ ga-ere ndị nwoke ọgwụ ahụ, aha ya aha ya bụ 'Viagra Connect' ma rụkwaa Pfizer mere, dabere na ahụike ha yana ọgwụ ndị ọzọ ha nwere ike ị .ụ. Ebumnuche mbido mgbe ịbawanye nnweta ọgwụ dị na 2018, bụ ịlụso ọnụ ọgụgụ nke ọgwụ adịgboroja adịgboroja kanta ịbụ onye ana erere ya n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Mana mkpebi ahụ nwekwara nsonaazụ a na-atụghị anya ya na iwebata ọgwụ ahụ n'akụkụ ọhụrụ nke ahịa.
Murray Blacket, onye na-ahụ maka mmekọahụ na north London, na-ekwu na ọ na-ahụkwu ụmụ nwoke ka ha na-ewere Viagra dị ka “amụma mkpuchi” ma ọ bụ “ihe nkwado” na ndụ n'ime ime. Ọtụtụ mgbe, nke a ga-abụ tupu ha pụọ ​​n'abalị pụọ.
“Anyị na-ekwu maka LGBT ọnọdụ chemsex mana na ọnọdụ ahụ kwụ ọtọ, ọ dị ka ngwụsị izu lara n'iyi ebe gị na mmadụ nwere onwe, were kooko na Viagra, gbadaa olulu, pụta na Mọnde, ”Blacket na-ekwu.
Dika August 2017, onwa asatọ tupu ere ya n'okporo uzo di elu, ndi dibia na UK na-akọ akụkọ omume na-eto eto nke ụmụ okorobịa na-amaghị ịzụ ahịa ọgwụ na ịntanetị n'amaghị ama iji kwalite arụmọrụ mmekọahụ ma ọ bụ, dị ka Alex, iji kwụsị iji ọgwụ ntụrụndụ ndị ọzọ na-eme ka ọ sie ike ịnọgide na-ere ọkụ.
O nwere ike bụrụ na ndị mmadụ nọ na UK karịa ndị ọzọ na Europe, America, Australia ma ọ bụ Canada, ichikota mmekorita nwoke na nwanyi, dị ka 2019 Global Drug Survey si kwuo, n'agbanyeghị agbụrụ nwoke na nwoke ma ọ bụ ntụziaka gbasara mmekọahụ. Ihe ndị a na-ejikarị bụ mmanya na-egbu egbu, cannabis, MDMA na cocaine - ha niile nwere ike igbochi inwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na ejiri ya na oke ọ doụ doụ.
Viagra na-arụ ọrụ site n'ịhụ na ọbara ga-ezuru ya n'ime amụ iji mee ka ọ dị mma. Ọ nweghị mmetụta ozugbo ma ọ na - arụ ọrụ naanị mgbe nwoke ahụ nwere agụụ mmekọahụ. Yabụ na ịgaghị agagharị n'ụlọ ebe a na-ere oriri na nkwari abalị na njedebe, kama ị ga-enwe ike ịdabere na ya ma ọ bụrụ na ị ga-enwe chi na njedebe nke abalị.
Blacket na-ekwu na ọtụtụ ụmụ okorobịa na-ewere ya bụ ndị ọkachamara - ndị nkuzi, ndị ọka iwu, ndị ọzụzụ onwe. Viagra adịghị ọnụ dị ka ọ na-adịbu, ma ọ ka na-ere ahịa na £ 19.99 maka mkpọ mbadamba anọ ma ọ bụ £ 34.99 maka asatọ. Ọ bụghị ọnụ ala maka ihe, n'ụzọ dị irè, 'dị bụrụ otu'.
Blacket kwuru, sị: "menmụ okorobịa enweghị obi ike karịa na ha nwere ike inwe mmekọahụ." “Ndị a na-ewere Viagra dị ka nkwalite ntụkwasị obi. Ọ bụghị inwekwu agụụ mmekọahụ - ọ bụ naanị inwe ike ịme 'nwoke nkịtị'. "
Mbelata nkea na ntụkwasị obi na - ejikọtakarị ọnụ ọgụgụ nke ndị mmadụ na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ mgbe niile n'ịntanetị. Ihe omumu emere ohuru nke achoputara n'etiti 14% na 35% nke umu okorọbia siri na ha na enwe nsogbu elektrọnik atụnyere 2-3% tupu 2008. Mary Sharpe nke Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ, ọrụ ebere agụmakwụkwọ na-elekwasị anya n'ịhụnanya, mmekọahụ na ịntanetị gwara Guardian: "Kemgbe 2008, mgbe igwe-free-porn, porn-elu ghọrọ nke dị mfe, ọ gbagoro ọtọ."
Blacket na-ekwu, na uto nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-elekwasị anya na mmekorita mmekọahụ na-enweghị isi nke pụtara na ndị mmadụ ga-enwe mmasị na mmekọahụ. Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na ọdịghị gị mma, mgbe ahụ ndị mmadụ nwere ike ịga n'ihu soro onye ọzọ. “Otu ọdịbendị na-anọ n'otu abalị bụ azụmaahịa n'akụkụ ahụ. I nwere otu ohere. ”
Ọ bụghị naanị na enwere nrụgide ọzọ ịdị njikere maka mmekọahụ, mana ọnụọgụ mmanya na ọgwụ ọjọọ ndị ọzọ na-egbochi arụmọrụ. Ndị ikom a na-enwekarị mmekọahụ mgbe ha afterụsịrị mmanya, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọgwụ ọjọọ. Thenweta Viagra yiri ka ọ na-ejikọ ya na echiche nke 'Apụrụ m inwetakwu pints ọzọ, m ka ga-emekwa ya.' ”
Uche a na - agbakwuziwanye ihe, ebe Viagra na-esikwu ike n'ọdịbendị bụ isi, Blacket na-ekwu. “Ugbu a a na-akpọsa mgbasa ozi n'okpuruala na n'akụkụ bọs maka Viagra [nyefere] na Vespa. Companieslọ ọrụ ndị a ahụwo mgbanwe n'ahịa ma na-etinye isi na ya. ”
Ọ dị ka ịnweta ụlọ ọrụ ụdị ejiji Deliveroo wetara Viagra n'ọnụ ụzọ gị ekerewo òkè n'ime ka ọgwụ ahụ nwee mmasị na ndị na-eto eto. Kama ihe ị ga-ezu ohi n’ụlọ ebe a na-asa ahụ́ papa gị, i nwere ike ịtụ ya n’ụzọ ị ga-esi Pizza. Mmetụta mgbanwe nke ọdịbendị a emeela ka Blacket hụ ka ụmụ nwoke ole na ole na-enweghị nchegbu banyere arụmọrụ, ndị chere na iwe Viagra ga-eme ka ha "sie ike" na inwe mmekọahụ na-atọkwu ụtọ.
Blacket nwere nchegbu na ụfọdụ ndị họọrọ iji Viagra na-atụrụ ndụ na-ewere usoro dị elu karịa ka ọ ga-atụ aro. Ọtụtụ na-ewere mbadamba 100mg, ebe NHS na-atụ aro ọgwụ nke 50mg otu ugboro n'ụbọchị. "Ndị mmadụ amaghị n'ezie ihe ọgwụ ndị ahụ pụtara - ha na-etinye echiche nke vitamin ị takingụkwu ihe." ọ na-akọwa. ”
Tooụ sildenafil nke ukwuu nwere ike ibute mmetụta ọjọọ dịka isi ọwụwa, ọgbụgbọ, afọ mgbu, imi egbochi na ọhụụ. O kwuru, sị, “Ajụọla m ụfọdụ n’ime ha otú obi dị ha n’echi ya, ha asị na ọ jọgburu onwe ya. Offọdụ n'ime ha abịakwutewo m ma jụọ onwe m, sị, 'M̀ ga-enwe nchegbu? Ogologo oge ole ka m ga-eme nke a? ”
Ọ na - eme ya ụjọ na ndị mmadụ na - eji ọgwụ na - ete akwụkwọ gbasara nnukwu okwu miri emi nke na - egbochi ndụ mmekọahụ ha. Ha na-etinye enyemaka otu bandwit maka Viagra. Nke a aghaghị ịbụ obere oge. ”
Ihe ndị sitere na Mary Sharpe na March 11 Akụkọ nke The Guardian pụtara na ibe a na ebe nrụọrụ weebụ Katọlik Ndị na-ebi ndụ ndụ. Isiokwu ahụ na-ehota isi mmalite ndị anyị na-asọpụrụ gụnyere nkwankwo Dr Donald Hilton na yourbrainonporn.com.
March 29, 2019, (Ndị na-ebi ndụ ndụ) - Ụmụ nwoke na - eto eto na - apụnara onwe ha ikike ịbanye na mmekorita onwe ha na ndị inyom dị ka ihe nkiri ikiri ihe na - akpali agụụ mmekọahụ mgbe nile na - eleghasị uche ha, na - ebelata ikike ha nwere inwe mmekọahụ.
N'ikwu ya, ụmụ nwoke na-eto eto site na 30 ha na-egbochie mmekọahụ, megide mmekọrịta chiri anya, megide ịmụ nwa, megide igosipụta ịhụnanya, megide alụmdi na nwunye, megide obi ụtọ.
Na na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-enye n'efu n'efu na ịntanetị.
"Ruo 2002, nsogbu nke ụmụ nwoke n'okpuru 40 na ED (erectile disys) bụ gburugburu 2-3 pasent," Mary Sharpe nke Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ gwara The Guardian. "Ebe ọ bụ na 2008, mgbe free-streaming, porn-elu porn ghọrọ ngwa ngwa, ọ na-esi nwayọọ bilie."
"(P) orn na-agbanwe otú ụmụaka si enwe mmekọahụ," nọgidere Sharpe, na ọ na-eme, "mgbe ọ bụ nwata mgbe ọ kachasị enwe ike ịda mbà n'obi na ahụ ike. Ọtụtụ nsogbu ahụ na ahụ ike uche uche na-amalite n'oge uto. "
Akwụkwọ akụkọ Guardian na-atụ aro, sị, "Ruo otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụmụ okorobịa ugbu a na-enwe ọganihu n'usoro erectile."
Ọdịdị ahụ na-emewanye nke ọma na ọ nwere aha: "Egwuregwu Erectile Dysfunction" (Porn-Induced Erectile Dysfunction) (PIED).
"Kama ime ka agụụ mmekọahụ ya sie ike n'ebe ndị mmadụ nọ n'ezie, a na-ahụkarị nwa agbọghọ taa n'ihu ákwà ngebichi, ọ na-agbakwa ụda nke ụbụrụ ya ka ọ nọrọ nanị ya n'ime ọnụ ụlọ ya, ka ọ ghara ịhụ ya n'anya," ka otu video na-akụzi, Brain na-eto eto na-ezute Intanet Ịntanetị dị elu.
"Onye ọgbọ bụ okwu m ga-eji kọwaa mmetụta ọ dị mgbe m gbalịrị inwe mmekọahụ na ụmụ nwanyị n'ezie," ka otu nwa okorobịa kwuru na vidiyo ahụ kwuru. "Ọ dị m ka ọ bụ ihe na-adịghị mma."
"Ọ dị ka enwere m obi ụtọ ka m nọrọ n'ihu ihuenyo (iji aka m egbo onwe m agụụ) na uche m na-eche na ọ bụ mmekọahụ nkịtị kama inwe ezigbo mmekọahụ," ka ọ gbakwụnyere.
"Ndị inyom anaghị atụgharị m, ọ gwụla ma e mere ha abụọ na n'azụ anya m," ka onye ọzọ kwuru.
Ndị ọzọ na-akọ nanị olileanya ha maka inweta na ịnọgide na-enwe ụlọ n'oge intimacy bụ "iche porn."
Ebe ọ bụ na ihe ahụ dị ọhụụ - ka emechara, ịnweta ịntanetị dị elu yana mfe, nnweta nkeonwe site na smartphones, iPads, na laptọọpụ kọmputa bụ ihe ọhụrụ na - adịbeghị anya - a ga-eme nyocha ihe omimi.
Ka ọ dị ugbu a, akaebe na-eme ka ndị ọkachamara - gụnyere ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ, ndị na-agwọ ọrịa uche, na ndị urologist - kọọrọ na ha na-anụ ụdị ákwá ndị a site na ụmụ okorobịa ndị na-agafe n'oge gara aga na ọnụ ọgụgụ kasị elu nke mmekọahụ.
Otu onye na-ahụ maka ihe ọmụmụ bụ Paul Church gwara LifeSiteNews na ọ bụ ezie na ugbu a enweghi ihe ngosipụta zuru oke maka mkpakọrịta dị n'etiti ojiji porn na erectile na-adịghị mma, ihe kpatara ya "ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị na-agwọ ọrịa, gụnyere onwe m, kwenyesiri ike na ọ bụ nsogbu buru oke maka ọgbọ ọzọ. "
"O siri ike ịmara kpọmkwem ole ụmụ okorobịa na-ata ahụhụ ED. Mana o doro anya na nke a bụ ihe ọhụrụ, ọ bụghịkwa obere, " kwuru Dr. Abraham Morgentaler, onye nduzi nke Health Men's na Boston na prọfesọ nke urology na Ụlọ Akwụkwọ Ahụike Harvard.
"Amaara m na nke a bụ eziokwu n'ihi na ahụmahụ m na nke a na-eme ndị m na-arụkọ ọrụ," ka Maureen Newberg kwuru, onye na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ (LCSW) nke na-arụ ọrụ na Washington, DC.
"Ana m eme ihe nzuzo nke 95 pasent nke ndị ahịa m bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwoke. Fọrọ nke nta ka ndị ahịa a niile nwee nsogbu porn ma ọ bụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ, "alụmdi na nwunye a na-enye ikike na onye nlekọta ezinụlọ bụ David Pickup gwara ndị na-ebi ndụ ndụ.
"Ahụmahụ m banyere nsogbu ha na ihe ịga nke ọma ha na-esi n'itinye egwu porn emeela ka nchọpụta chọpụtara na porn bụ ọgwụ dị ike, '" ka Pickup kwuru.
Ịṅụ ọgwụ ọjọọ Porn, dị ka ihe ndị ọzọ na-eri ahụ, na-emebi ndụ nke ọgbọ dum nke ụmụ okorobịa. Ọkà mmụta sayensị dị na Europe, Dr. Gerard van den Aardweg, kwuru ya:
Ndị na-agba ohu na-agba ohu bụ ụmụ nwoke dara ogbenye, ndị dịpụrụ adịpụ na kọntaktị ha na mmadụ. Anu wolf. Ka ha na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, otú ahụ ka ha na-eme ka nchegbu ụmụ ha na-agụsi ike n'ọchịchọ ịbụ "nwoke buru ibu," na obere ka ha nwee ike ịme ezigbo kọntaktị.
Ihe ndị a na-atụghị anya ya, ndị a na-atụghị anya ya site na iji ụmụ okorobịa na-eme ihe mgbe ọ bụla na-agbanyeghị ụbụrụ na-adịghị mma ma na-emebi mmekọrịta alụmdi na nwunye dị mma.
Mark Regnerus, prọfesọ nke nkà mmụta mmekọrịta ọha na eze na Mahadum Texas dị na Austin na onye otu okenye nọ na Ụlọ Ọrụ Austin maka Ọmụmụ banyere Ezinụlọ na Omenala, atụ aro a na-emekọ ihe n'etiti iji egwu egwu na nkwado maka ịlụ nwoke na nwoke na nwanyị na 2012.
Onye nyocha kwuru na "Nkwado ndị okenye tozuru etozu maka ịmegharị alụmdi na nwunye nwere ike ọ gaghị abụ ihe nile sitere n'echiche banyere nnwere onwe, ikike, nnwere onwe, na ntinye aka na mma. O nwere ike ịbụ, ma ọ dịkarịa ala na akụkụ ụfọdụ, ihe na-apụta site n'igosi ihe dịgasị iche iche na mmekọahụ na-egosi, "hụrụ site na ịntanetị porn.
"Ebe nrụọrụ weebụ na-akpali agụụ mmekọahụ na ebe nrụọrụ weebụ na-adịkarị mfe ịkpa ókè nke nwoke na nwanyi na-eme ihe - ma ọ bụ ụdị ndị dị otú ahụ - site n'aka onye ọzọ," ka Regnerus kwuru. "A na-emeso ndị na-emepụta ihe n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ka ihe ọkụ ọkụ nke na-eji ụdị mmekọahụ eme ihe."
"Ndị a abụghị nna nna nna gị," ka o kwukwara.
Mmetụta na ike nke ikiri ihe nkiri site na ịntanetị
Ka agha nke "nnwere onwe ikwu okwu" ikike nke ndị na-ese foto na ụlọ ọrụ ha enweela ọtụtụ afọ, ọ bụ mmadụ ole na ole hụrụ na ndị na-ekiri nwoke na-ekiri ha na-aghọ mmebi iwu. Ugbua a na-enweghi ike ikpuchi ya.
Dr. Donald Hilton, prọfesọ na-ahụ maka mmekọrịta na Ngalaba Neurosurgery, Mahadum Texas Medical School na San Antonio na onye isi na Board of Directors of Medical Institute for Mmekọahụ Health dere na edemede nke akpọrọ Ihe-Egwu: Iku Ọkụ nke Mmekọahụ Ihe nsi (anaghizi adi).
Ọ dị ebe niile. Pornhub, ebe nke abụọ a na-enweta na net, nwere nde mmadụ 92 na-aga na 2016, nke zuru ezu maka vidiyo 12.5 maka onye ọ bụla nọ n'ụwa. Ọ ghọwo ụzọ kachasị mma nke ịkụziri ụmụ akwụkwọ banyere mmekọahụ na ọbụna na-amalite ugbu a, ebe ọtụtụ ndị na-eto eto hụrụ mmekọahụ, gụnyere n'etiti mmadụ abụọ.
Nkesa nke a nke mmekọahụ na-egbu mmadụ na-emebi ndị na-ele ya ma na-eri ahụ ndị nọgidere na-eji ya. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ porn na ndị na-akwado agụmakwụkwọ na-akwado ya na-emegide isi okwu ndị a. Ha na-ekwu na naanị otu nsogbu porn bụ ihere na omume rụrụ arụ nke okpukperechi tinyekwuru ya.
Dr. Jeffrey Satinover, na okwu nyere ya na Kọmitii Senate nke United States na 2008, kọwara, sị: "O yikarị ka ọ pụtara ìhè na foto ndị gba ọtọ bụ ihe ọ bụla karịrị ụdị 'okwu.' A ghaghị arụrịta arụmụka ya, enweghị ya, ma ọ bụ ihe ọjọọ ọ bụla na okwu kwesịrị ekwesị 'okwu', iwu anyị na-egosipụtakwa. Anyị na-arụ ụka banyere 'omume' nke akwụkwọ ndị na-akpali agụụ mmekọahụ; ya okike dị ka 'elu' ma ọ bụ 'ala' nkà; ma ọ nwere 'ihe mgbapụta' ọ bụla. Ntughari aka na 'oru' nke 'akwukwo' na 'omume' nke ‗gba egwu 'ndi n'eme ihe n'echere ihe n'onu nke akwukwo iwu nke America - okwu nke ihe nkowa nke mere ka o doo anya na nghota nke ihe ndi gba otua bu ihe omuma ma kwenyegh. "
"N'ibute kọmputa, usoro nnyefe maka ihe mkpali na-akpali agụụ mmekọahụ (ịntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ) aghọwo ihe na-adịghị mma," ka nọgidere na-eme.
"Ọ dị ka à ga-asị na anyị echepụtawo ụdị heroin 100 ugboro dị ike karịa na nke mbụ, na-eji ya eme ihe na nzuzo nke ụlọ nke aka ya ma gbanye ya ozugbo na ụbụrụ site na anya," ka Satinover kwukwara. "Ọ dị ugbu a na-enweghị ego site na netwọk nkesa nke onwe ya, dị ka nkà ma chebe ya site n'usoro iwu."
Idozi mmebi ahụ
"Mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ na-akpali agụụ mmekọahụ bụ ihe dị ebe a iji nọrọ," ka Dr. Tim Lock kwuru, bụ ọkà mmụta sayensị na onye inyeaka prọfesọ na Institute for Psychological Sciences, University of Mercy University.
PIED ga-anọnyere anyị "ruo mgbe mmadụ nwere ike ịzụlite àgwà nke njide onwe onye na ndị nne na nna nwere ike kwenyesie ike na ọ dị mkpa ka ha jiri ntanetị internet (na ịntanetị na-aza ajụjụ) iji gbochie ụmụ ha ịbanye na ebe nrụọrụ weebụ na-ekwesịghị ekwesị," kwuru Lock na nkwupụta na NewsShare. "Ọ dịghị mfe ma ọ bụ na-enweghị mgbalị ịzụlite nwatakịrị nke ji njide onwe onye, ​​ịdị ọcha, ịdị ọcha, na ịdị obi umeala. Ndị nkụzi nke ụmụaka aghaghị ibu ụzọ kwenye na ụkpụrụ ndị a. "
"Ọ bụ ihe siri ike ire," ka Lock kwuru. "Ọ gwụla ma ị maara na Onyenwe anyị bịara inye ndụ, na inye ya n'ụba."
Hilton kwuru ihe anọ dị mkpa:
Nke mbụ, anyị ga-echebe ọgbọ na-esote site na mmekọahụ na-egbu egbu nke ụlọ ọrụ porn na ndị apologists na-akwalite;
Nke abụọ, anyị ga-alaghachi na ọha mmadụ ebe ndị okenye na-ajụ ịkatọ egwu nke porn;
Nke atọ, ọdịbendị nke ọdịbendị anyị na-esiwanye ike nke ịkpa ókè agbụrụ na mmekọahụ, mana anyị na-eme ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-enwe mmekọahụ na igwefoto na-agagharị. Anyị aghaghị ijide ụlọ ọrụ porn ahụ n'otu ụkpụrụ ahụ;
Nke anọ, anyị aghaghị ịlaghachi na omenala nkwanye ùgwù, ọmịiko, na ọmịiko, nke bụ nkwenye nke ọdịbendị nke oge a.
Enwere ike ịchọta ọtụtụ ihe ọmụma gbasara ịkwụsị ịse porn na ịgbanahụ nsogbu ndị nwere ike ibibi na ebe nrụọrụ weebụ ego aka, Brain gị na Porn.
A na-enye azịza nke Onye Kraịst nke ịgba ohu iji egwu porn Gbalịsie ike.
11 March 2019. Na otu isi ihe odide ndụ Amy Fleming, Mary Sharpe kwuru ọtụtụ ihe site na The Guardian na-akpali agụụ mmekọahụ iji na erectile adịghị arụ ọrụ.
Ihe ruru otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ụmụ okorobịa ugbu a na-enwe nsogbu ọkpụkpụ. Ụfọdụ na-agbanye na ihe ndị dị oke mkpa dị ka penile implants - ma na-egwu foto ha na-akpali agụụ mmekọahụ bụ naanị ihe ngwọta?
Ihe ngosi: Nishant Choksi
Tebe a bụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-akwado ebe mgbaba nke London Underground na-ebu okwu bụ "ED BỤ" na-esote foto nke nwoke dị mma na-eto eto. "Echegbula onwe gị," ka ọ na-ekwu na obere edemede n'okpuru. "Ed abụghị onye isi. Ọ bụ ihe iberibe. Ọ dị mkpụmkpụ maka nrụrụ erectile. "Mgbasa ozi na-akwado ohuru ohuru nke sildenafil (nke a na-akpọkarị Viagra), nke anyị kwesịrị iche na ọ bụ igbu nsogbu ahụ. Ma, dị ka ọ na-anọchi anya, ED dịka ịnwụ anwụ.
Ụzọ ndị dị na Viagra bụ ndị okenye na-arịa ọrịa, ma dịka ọmụmụ na nyocha ọhụụ kachasị dị ọhụrụ, n'etiti 14% na 35% nke ụmụ okorobịa nwere ED. "Ọ bụ onye nzuzu kama ọ bụ eziokwu," ka Mary Sharpe nke Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ, ọrụ ebere agụmakwụkwọ na-elekwasị anya na ịhụnanya, mmekọahụ na ịntanetị. "Ruo 2002, ọnọdụ ụmụ nwoke n'okpuru 40 na ED nọ gburugburu 2-3%. Ebe ọ bụ na 2008, mgbe nnwere onwe-iyi egwu, porn dị elu wee dị ngwa ngwa, ọ na-arịwanye elu nke nta. "Ihe àmà, ọgwụ na nkpọkorita, na-arịwanye elu na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eji eme ihe dị mkpa.
Idekọtanụ ED na-akpali agụụ mmekọahụ
Clare Faulkner, onye na-agwọ ọrịa na mmekọrịta mmekọrịta n'etiti ndị obodo London, bụ otu n'ime ndị na-ejikọta ED na ihe ndị gba ọtọ. "M ugbu a nwere ndị ahịa ED n'oge ha bụ 20s," ka ọ na-ekwu. Akụkụ nke nsogbu na-akpali agụụ mmekọahụ bụ na ọ bụ "ahụmahụ dị nnọọ njọ. Ogbugbu na-abịa n'èzí, nke nwere ike ime ka ọ sie ike ịbịaru ahụ gị. "Ọ na-anọgide na-eme ihe akụkọ ahụ, ka ọ na-ekwu, na" ụmụ nwoke dị ike siri ike, ndị inyom dịkwa njikere maka mmekọahụ n'oge niile ".
Ndị na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-ekiri ndị na-ekiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na-aghọkarị ndị na-achịkwa ahụmahụ mmekọahụ ha - nke ọzọ, ka Faulkner na-ekwu, "adịghị emegharị anya n'ime ụwa n'ezie". Ịnagide ezigbo mmadụ, nke nwere mgbagwoju anya, ya na mkpa na nchekasị, nwere ike ịdaba na-etinye ya.
N'ịntanetị ndị na-emepụta ihe n'ịntanetị na-ejide onwe ha na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-adịghị mma (PIED), ọtụtụ iri puku ndị na-eto eto na-agbasi mbọ ike iji kwụsị iji ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, O siri ike igosi na ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-eme ka ED, ma ihe àmà ndị a na-egosi ihe ndị si na akwụkwọ ndị a na-ahụ anya: na ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ike ịmalite àgwà ha, ha na-amalite ịmaliteghachi ikike nke inwe mmekọrịta chiri anya.
Ụfọdụ ndị na-eto eto amalitela nkwado ha, dị ka NoFap (ụgha maka "enweghị mmetọ onwe ya"), nke Alexander Rhodes setịpụrụ na US. (Sharpe na-ekwu na ụmụ okorobịa ugbu a "na-eji mmekọahụ akpọrọ ihe na-akpali agụụ mmekọahụ - ha anaghị ahụ ha iche.") Rhodes, bụ 31, malitere iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet na 11 ma ọ bụ 12. "Anọ m na ọgbọ mbụ nke ndị toro eto na porn internet dị elu," ka o kwuru na mkparịta ụka n'ịntanetị na nso nso a.
Site na mgbe ọ malitere inwe mmekọahụ na 19, ọ gara n'ihu ikwu, sị: "Enweghị m ike ịnọgide na-enwe ụlọ na-enweghị eche n'echiche porn. Ọ bụrụ na ndị na-ege ntị na United States National Center on Sexual Exploitation: "Ụmụaka nke United States na ọtụtụ n'ime mba ndị mepere emepe na-atọ ụtọ site na ntanetị n'ịntanetị bụ ebe ikpughe foto na-akpali agụụ mmekọahụ. bụ ihe kacha mkpa. "
Ndị na-acha Porn na-eto eto
Ntorobịa nke Rhodes malitere ile foto ndị gba ọtọ abụghị ihe ọhụrụ. Na 2016, Mahadum Middlesex chọpụtara na, ebe 60% nke ụmụaka buru ụzọ lelee ya n'ụlọ nke aka ha. Na ọmụmụ ihe Irish nke e bipụtara n'oge gara aga na magazin bụ Porn Studies chọpụtara na 52% nke ụmụ nwoke malitere iji foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'oge 13 ma ọ bụ n'okpuru. Mgbasa mgbasa ozi nwere ike ịbụ ọnụ ụzọ ámá, kwuru Sharpe. "Kpakpando kpakpando nwere Instagram akụkọ ya mere ha na-enweta ụmụaka na-ele ha na Instagram, na n'ime ha ihe ha ga-asị: 'Lee m ọhụrụ video.' Otu ma ọ bụ abụọ clicks na ị na-achọ na hardcore porn. Ụmụaka nke 12 ma ọ bụ 13 anaghị eche na ha na-ele ihe okenye okenye siri ike. "
Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ abụghị ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na nzukọ, kwuru Sharpe, "mana egwu egwu na-agbanwe otú ụmụaka si enwe mmekọahụ". Ma ọ na-eme n'agbata afọ ha, "mgbe ha dị obere mgbe ha na-esikarị bụrụ ndị nwere ike ịdaba na nsogbu ahụ ike na uche. Imirikiti riri ahụ na ahụike uche uche na-amalite n'oge uto. "Ya na Faulkner kwenyere na ịrị elu nke ikiri ihe na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike dịkarịa ala kọwaa ihe mere Millennials na-enwe mmekọahụ karịrị ọgbọ ahụ n'ihu ha, dị ka otu nnyocha e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ bụ Archives of Sexual Behavior.
Ahụmahụ ọkachamara nke Porn
Gabe Deem, onye nchoputa ihe omimi nke ikiri ihe ojiri Mba Reboot, na-ekwu n'ụzọ doro anya banyere ahụmahụ ya onwe ya. Mgbe ọ bụ 23, o kwuru: "Agbalịrị m iso nwa agbọghọ mara mma nwee mmekọahụ, nwanyị m nwere mmasị na ya, ọ dịghịkwa ihe merenụ. Enweghị m ike inwe mmetụ ọ bụla, ọ pụghịkwa inwe ntakịrị ihe nke ụlọ. "
Dị ka à ga-asị na ọ na-eri ihe ndị ọzọ, Faulkner na-ekwu, sị: "Ndị mmadụ dị mkpa ka e nwee ọgwụ dị elu iji nweta elu. Ọ na-abụkarị banyere ịkwanye ókè iji nweta otu obi ụtọ ahụ. Nke pụtara ihe ha na-ele anya na-enwetawanye ike ma nwee egwu. Ndị ahịa na-agwa m na ha adịghị enwe ihe dị mma na ihe ha na-ekiri. "Mgbe ndị na-eme nchọpụta na-enyocha ntụrụndụ nke ndị na-agba ndị gba ọtọ, ka Sharpe na-ekwu:" Ha na-ahụ otu ụbụrụ ụbụrụ nke na-emekarị ihe niile riri ahụ. "
Nchegbu nke ịrụ ọrụ
Ụfọdụ ka na-elepụ anya na ED n'etiti ụmụ okorobịa dị ka nchegbu arụ ọrụ, ma Sharpe kwuru mgbe nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu maka ụfọdụ, "Ihe anyị na-anụ site na ndị dọkịta, ndị na-agwọ ọrịa, ndị dọkịta na ndị na-emeso omume mmekọahụ ike bụ na ihe karịrị 80% nke nsogbu bụ ihe metụtara mmekọahụ." Foundation Reward Foundation ndi ulo oru nlekota ndi ozo na ndi oru nlekọta ahuike n'ofe UK ma choputara na ndi dibia na ndi na-acho ogwu achoghi eche na ha na-agwa umu nwoke ndi ozo ndi nwere ED banyere ihe ogba ogbagwo ha. "Ha na-enye ha Viagra na nke ahụ anaghị arụ ọrụ maka ọtụtụ n'ime ha," ka Sharpe na-ekwu. "Ọ naghị eche banyere nsogbu ahụ kpatara."
Mgbe ọgwụ ndị ahụ adịghị arụ ọrụ, Sharpe anụwo banyere ụmụ okorobịa na-enweta penile implants (a na-etinye n'ime ọgwụ na penis iji nyere aka rụọ ọrụ). "Otu n'ime ndị na-ahụ maka ahụike na otu n'ime ụlọ akwụkwọ anyị n'afọ gara aga kwuru na onye ọrịa nwere mmadụ abụọ dị otú ahụ." Ọ dịghị onye chere na ọ ga-ajụ ya banyere ihe ndị gba ọtọ.
Na nleta ụlọ akwụkwọ na-adịbeghị anya, Sharpe na-echeta, nwata nwoke dị afọ iri na ụma jụọ ya ugboro ole n'ụbọchị na-egbo onwe ya agụụ mmekọahụ. "Ha na-eji ya mgbe niile," ka Sharpe na-ekwu, "ọ dịghịkwa onye na-agwa ha na ọ bụ nsogbu."
24 February 2019. Mary Sharpe nyere nkọwa ọkachamara na ndị nta akụkọ na ikpe a dị oke mwute na urtslọikpe Scottish. O juru mba ahụ anya. Akụkọ a dịkwa na The Sunday Post dị ka “"